Ukufumana Iphupha laseYurophu: 5 Kufuneka-utyelele amazwe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eIceland > Ukufumana Iphupha laseYurophu: 5 Kufuneka-utyelele amazwe
Iingcebiso zokuhamba ngeMoto, Uhambo loLoliwe, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Zokuhamba Qeqesha Greece, Uloliwe kuhambo Italy, Travel Europe, Ukuhamba eIceland
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 09/04/2021)
IYurophu lilizwekazi eliphambili ngokubhekisele kwimpilo, kuhlala abantu, nezixeko zanamhlanje ezizele lulonwabo. Kukho intabalala yemimangaliso yoyilo, olondolozo lwembali, kunye neeresityu kwilizwe ngalinye laseYurophu onokucinga ngalo. Ubomi bobusuku kunye neendawo zokutya kwilizwekazi liphela alizi ndawo. Izilwanyana zasendle kunye nezinto ezinomtsalane kwindalo yelizwekazi ziyamangalisa kwaye kulula ukufikelela kuzo. Kwaye ngenxa yento ye-EU kunye nothungelwano lweendlela ezikumgangatho ophezulu kwilizwekazi liphela, Kulula ukuba abahamba endleleni bahlole ilizwekazi liphela. Ukufumana iphupha laseYurophu ungasebenzisa imoto eqeshisayo okanye uthutho lukawonkewonke.
Ngaba uyayifuna i-IDP (Ilayisensi yokuqhuba yaMazwe ngaMazwe) Ukuqhuba eYurophu?
Well, amanye amazwe afana ne-Italiya afuna abaqhubi bamanye amazwe babene ilayisensi yokuqhuba yamanye amazwe njengobungqina bokuqhuba kakuhle. Kulungile ukuzisa ilayisensi nakumazwe angayifuniyo kuba ungayidinga ukuqinisekisa iiarhente zokuqeshisa imoto kunye namapolisa ezendlela ukuba ungumqhubi ofanelekileyo.. kwakhona, ngaphambi kokuya, jonga neCDC ukuqinisekisa ukuba iindawo esixoxa ngazo apha azichatshazelwa ngamandla bubhubhane. Unoko engqondweni, Nalu uluhlu lwe 5 kufuneka undwendwele amazwe aseYurophu.
1. Santorini, Grisi
Abantu abakhe baya eSantorini bakholelwa ukuba esi sixeko yeyona ndawo kuthandwa kuyo hayi iYurophu kuphela kodwa liphela kwihlabathi. Ilungile kubantu abasandul 'ukutshata abafuna i Ikhefu lomtshato. Uya kuba nomdla kumbono omangalisayo wecaldera kunye nokutshona kwelanga. Unako ukunyuka, yiya kukhenketho lwesikhephe, okanye ube nemva kwemini ekhululekile kwiilwandle ezimnyama zedolophu ezinentaba-mlilo. Ukuba uyayithanda ibhotile, uya kuthanda isampulu iiwayini zalapha ecaleni kwe- IMeditera. ISantorini alke ikhaya kwezinye zehotele eziphambili eGrisi.
2. Amava ePhupha laseYurophu: Lake Como, ElamaTaliyane
ILake Como ithandwa kakhulu ngenxa yeendidi ngeendidi zezindlu zokuhlala ezintle kunye neelali, ukutya okumnandi (Ingaba nguwe, Ipitsa yaseNtaliyane?), kunye neendawo ezimangalisayo zokufota, Zonke ezo zinto zinxibelelene neenkonzo zesikhephe zemihla ngemihla. Ukuba unexesha kunye needola ezingaphezulu, Unokuqesha iphenyane elinenjini kwaye ukhwele uye kwidolophu encinci yaseBellagio. Ngezinye iindlela, unokuthatha uhambo okanye Sebenzisa i Ibhayisekile ehamba ngegesi kwaye uyonwabele imibono emihle nguwe. Imozulu apha iyamangalisa unyaka wonke kwaye ngenxa yenkcubeko yendawo ebuyileyo (akukho baninzi abakhenkethi), ufumana elona thuba lilungileyo lokuqhekeka kwimigudu kunye neentsini zobomi bakho obuqhelekileyo. ILake Como ikwanaso nesithandwa sothando sakusebenzisela ixesha lokutshata.
UFlorence waya eComo ngololiwe
EMilan ukuya eComo ngololiwe
ETurin ukuya eComo Ngololiwe
IGenoa ukuya eComo ngoLoliwe
3. Reykjavik, Ayisilend
Idolophu enkulu yaseIceland iReykjavik iphakathi kwezixeko ezikhulu zaseYurophu zabahambi, ngenxa yezizathu ezininzi. Ukuba unomdla kwimbali, uya kuyithanda iReykjavik kwiimyuziyam zayo ezintle nezityebileyo phakathi kwazo Imyuziyam yoLwandle iViking, IMyuziyam yase-Einar Jonsson, kunye neMyuziyam yoBugcisa. Idolophu elikomkhulu nayo ijikelezwe luluhlu olunomtsalane olumangalisayo, iyenza elona zibuko lilungileyo lokundwendwela kwamanye amazwe. Uza kubona kwaye ube namava eetoni zezimanga zejoloji kubandakanya iingongoma zelava, iingxangxasi, kunye neBlue Lagoon. Iingxondorha, ezihambayo, Iilwandle ezinesanti, kunye neentaba-mlilo zichaza indawo yaseReykjavik.
Ngeempawu zokutya, Uyakuthanda ukungcamla uluhlu olubanzi lokutya okuqhelekileyo kwesi-Icelandic kwiindawo ezinje ngeSushi Samba kunye neBaejarins Beztu Pylsur. Ukuba uyazithanda izilwanyana zaselwandle, ungaya ukubukela iminenga kwizibuko elidala laseReykjavik, ikhaya ukuya ngaphaya 20 iintlobo ezahlukeneyo zeminenga. Unokubona amahlengesi, ukudada, kunye neeporpoises, phakathi kwezinye izilwanyana zaselwandle.
4. Ukufumana Iphupha laseYurophu: Prague, Umphakathi waseCzech
Abakhenkethi abaninzi bayayithanda iPrague ngeziganeko zayo ezimangalisayo, Ukusuka kwimihla yeholide ukuya kwimihla ngemihla unyaka nonyaka. Ezinye zeziganeko ezizaliswe lulonwabo ekufuneka uzenze xa usePrague zibandakanya iBohemian Carnevale xa undwendwele isixeko ngoFebruwari., okanye UMnyhadala weBhiya waseCzech xa undwendwele ngoMeyi. Ubomi bobusuku apha sesona sizathu siphambili sokuba abantu batyelele, neeklabhu zeJazz nezinye umculo live kulawula indawo yolonwabo. Umnyhadala wonyaka wePrague Spring Music Music yenye yeendlela zokuzonwabisa zasePrague. Unokwenza itheko ubusuku bonke ngenxa yokhuseleko oluqinileyo olujikeleze isixeko. Ukuba uyabuthanda ubugcisa nembali, ukhenketho oluya kwiMucha Museum okanye kwiMyuziyam yaseKafka luya kwenza iqhinga kuwe.
ENuremberg ukuya ePrague ngoololiwe
EMunich ukuya ePrague ngoololiwe
IBerlin iya ePrague ngoololiwe
IVienna iya ePrague ngoololiwe
5. Amava ephupha aseYurophu: Paris, Fransi
Iitoni zeempawu zomhlaba odumileyo, amathuba okuthenga angapheliyo, uluhlu olubanzi lokutya okumnandi, ubutyebi bembali, nengqokelela yobugcisa, kunye neepaki ezikumgangatho wehlabathi kunye negadi zenza iParis ivelele kwisihlwele. Ezinye zeempawu ekufuneka uzibonile ubuncinci kanye ebomini bakho zibandakanya i-Eiffel Tower, I-Sacred Heart Basilica, Arc De Triomphe, KwiMyuziyam yaseLouvre, kunye nePalais Garnier. Ukuba uthanda ukuthenga, Uyakuthanda ukuhlikihla amagxa ngefashoni ephezulu yaseParis eRue Du Commerce, IBoulevard Saint Germain, kunye nokunye okunethezeka izitrato zokuthenga. Kwaye ukuba uyabuthanda ubugcisa, kukho iingqokelela ezahlukeneyo zobugcisa ezijikeleze iParis kwisampulu, kubandakanya uMusee dOrsay, Musee kaZwelonke uPicasso, kunye neMusee du Quai Branly.
IYurophu ayinakuze ifutshane "kuluhlu lwamabhakethi" iidolophu kunye needolophu zabakhenkethi. Konke kuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali, ixesha, kunye nenjongo yokutyelela. Olu luhlu luya kuvula kuphela amasango wokuba ujonge ezona ndawo zinomtsalane kwilizwekazi.
Apha Gcina A Isitimela, siya konwaba ukunceda ukucwangcisa uhambo oluya e 5 Amazwe aphuphayo eYurophu. Uhambo ngololiwe eYurophu ilungele ukuhamba ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka i-blog yethu "Iphupha laseYurophu: 5 Kufuneka-utyelele amazwe aseYurophu ”kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
phupha mzantsiweb YangYiDi KufunekaVisitCountriesInEurope Ukuhamba ngeenqwelo-mafutha travelbytrain Ukunyuka kweRiphabliki travelfrance travelitaly
Kutheni Train nokukhubeka Kungcono Road ngenxa yokusindwa
Beer Route – Beers Best EYurophu By Train
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe